Taye Dendea Aredo – Site Title
Posted byabdiaminbakar 18th Jul 2021 Posted inUncategorized
“Qeerroon kaleessa dhagaan; har’a rasaasaan juuntaa harcaasaa jira” -Obbo Taayyee Danda’aa.
TPLF irree qeerroofi qarree Oromootiin erga harca’ee booda dhiifamaan bira darbuun biyya ijaaruuf yaalii taasifamu caalaa biyya diiguu ooltee bulteesaa godhachuu Dubbii Himaan Dhimmoota Kominikeeshinii Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa ibsan.
Dubbii himichi Obbo Taayyee Danda’aa akka Gaazexaa Bariisaatti himanitti, humni addaa Oromiyaa Juuntaarratti bobba’e qeerroo kaleessa dhagaadhaan aangoorraa isaan buuseedha.
Akkuma bofti mataa dhahamuu baannaan biyyoo arraabdee kaati jedhamu murni Juuntaa TPLF erga aangoorraa ari’amees hannaafi saamicha amaleeffate hawwuun abjuu aangootti deebi’uutiin cichee wixxifataa jira jedhan.
Juuntichi nagaa buusee lammiilee hunda faana jiraachuu osoo danda’uu humnaan aangootti deebi’uuf yaalii taasisaa waan jiruuf adeemsichi ammoo yakka waan ta’eef, ilmaan sirnicha dhiigasaaniin fidan obsa waan hinqabneef tarkaanfii sirreessaa fudhachuuf garasitti imalaniiru jedhan.
Warraaqsichi biyya badiirraa baraaruudha kan jedhan dubbii himichi, injifannoon galmaa’u kamuu bu’aa dhiiga ilmaan sabaafi sablammoota waraanicharratti hirmaatanii ta’uus beeksisaniiru.
Seenaa darbe ilaalchisuun seena jallisuun mul’atu kun har’as dabalmuu hindandahuu laata gaaffii jedhuuf deebii laataniin hunduu akka hirmaannasaatti seenaan dhugaa barraahuufii akka qabu ibsaniiru.
Kan darbe dhiifamaan akka cehamu jedhamee bira darbamuuf yaalamus, murnichi ammas nagaa caalaa waraana labsuusaatiin farra nageenyaa kana dhabamsiisuuf humni addaa Oromiyaa qeerroofi qarree keessaa babahe isa sardaa jira jedhan.
Wayita humni addaa Oromiyaa bobbahu juuntichi Oromoofi sabaaf sablammoota biroo fira kooti holola jedhu afarsuus kan isa dhagahu hinjiru jedhu.
Murni kaleessa isnaayparii adda ilmaan biyyattii dha’aa ture har’a fira fakkaachuun nageenyaaf akka hintaane hubachuun barbaachisaa ta’uus Obbo Taayyeen dhaamaniiru.
Warraaqsi biyya baraaruu kun gahee naannoo tokkoo qofa osoo hintaane, kan Itiyoophiyaanotaa hunda waan ta’eef, naannoleen humna addaa bobbaasuun tarkaanficha saffisiisaa jiru jedhan.
Guyyaan Kun Hiree Guddaa Rabbin Ummata Muslima Badhaase, Guyya kana Itti Fayyadamu baannan Khasarree. Warra irra Fayyadamu nuhaa godhuu